Kaalaya ila arag Jannada
Forums › My Category › About islam
Kaalaya ila arag Jannada.
Sidaan wada maqallay, Jannadu waa meel aad u cajiib ah, oo Allah iyo Nabiggiisu ay aad noogo sifeeyeen, maanta bal isla fiirinno, Jannada sifaadkeeda iyo quruxdeeda:
Waxaan meeshaan ku soo koobeynaa macnaha xadiithyaal iyo aayad ka hadlay Jannada, Allaha naga yeelo ahalkeedee. amin
Furaha ( miftaaxa) Jannada
Furaha Jannada waa ( user name) ” Laa ilaaha ilal Allah, Muxammadun Rasuulullah”
Furaha Jannada ( Password) waa ” camalka saalixa ah oo la sameeyo, qofkaan camal saalixa ah sameysan, muftaaxa jannada uma furo.
Qofka ugu hor galaya Jannada
Rasuulka Allah , Muxammad SAWS, kadib markuu us shafeeco muminiinta.
Albaabka Muxammad SAWS, oo la yidhaah albaabka tawbada
Albaabka Soonka, oo la yidhaah, albaabka Rayaan
Albaabka Xajka iyo Cumrada
Albaabka xidhiidhinta ( waalidka, qaraabada iyo wuxuu Allah faray in la xadhiidhsho )
Darajooyinka Jannada, iyo qolalkeeda
Jannadu waa darajooyin, waxaa ugu sarreeysa, Al Firdows Al Aclaa . wexeyna ku hoostaalla carshiga Raxmaanka Caza wa Jalla, oo ay ka soo burqadaan wabiyaasha jannada ee afarta waaweyn ah.
1. Wabiga Caanaha
2. Wabiga Malabka
3. Wabiga Khamriga
4. Wabiga Biyaha
Maqaamyada Jannada Firdowska
Firdouwska dhexdeeda waxaa ugu sarreysa Maqaamka la yidhaah ( Al Wasiilah) oo ah maqaamka Rasuulka SAWS, qofkii u barya Allah Rasuulka SAWS in maqaamkaas la gaadhsiiyo, wuxuu xaq u yeeshaa in Rasuulku SAWS uu u shafaaco qaado maalinka qiyaamaha.
Waxaa ku xiga qolalka ahlul Cilliyiin, oo ah daaro isdulsaaran, oo ka sameysan jawahirta qurxan oo qaaliga ah iyo dhagaxda ( Gems) oy hoostooda wabiyaashu durdurayaan. Maqaamkanna waxaa leh Nabiyaasha, Shuhadada, kuwa Dhibka iy cudurrada ku sabra, iyo kuwa isku jecel Allah dartiis.
Waxaa kaloo ku yaalla Jannada qolal ka sameysan jawaahir sida quraaradaha ( dhaloodhinka/ hiiraan accent
) ( Transparent) oo la iska dhex arko. Jannadaas waxaa leh
1. Qofkii hadal qurxan ku hadla
2. Masaakiinta cunnada ku sadaqeysta
3. Saqbadhkiina, markey dadka seexdaanna, u istaaga cibaabada Allah jeceyl awgiis.
Waxaa markaas soo hadhay darajooyinka boqolka ah oo dadka inta soo hadhay loo kala qaybiyo, qofwalba iyo wuxuu shaqeystay intuu noolaa. Waxaana ugu liita darajada qof leh hantida iyo maalka tobanka boqorrada aduunka ugu taajirsan ( Ten times the GNP of USA, Real Estate and Assets put together)
Magacyada Webiyaasha Jannada
Jannadu wexey leedahay webiyaal iyo ilo ( lakes) oo ka soo wada burqada afarta webi ee ka yimaada Firdows Al aclaa, waxaana ku soo arooray magacyadooda Quraanka waxaana ka mid ah:
1. Webiga Al Kawthar, waana webiga Jannada oo la siiyey Rasuulka Allah SAWS oo ay ka cabayaan Muslimiintu, maalinka xisaabta qiyaamaha, ooy kabban doonaan, kabbasho ayan dabadeed oomi doonin mahada Allah darteed, waxuuna Rasuulku SAWS ku shhegay webigaas in xeebtiisa ay ka sameysan tahay luulka qolofkiisa, ( Pearl Shells), carradiisuna ay tahay Misk, biyahiisana ay ka ka cadyihiin barafka ( snow), kana macaan yihiin sokorta, weealashiisana ay yihiin dahab iyo qalin.
2. Webiga Al Baydakh
Waa wabiga lagu kudo ( la dhex geliyo) shahiidiinta oo ay ka soo baxaan ayagoo u qurxan sida bisha habeenka caddaha ah, ayagoo ka bogsaday dhibkii adduunka ksu soo gaadhay Allah dartiis.
3. Webiga Baariq
Waa webi ku yaal albaabka Jannada, oo ay fadhiistaan shahiidiinta, oo loogu keeno risqigooda jannada, habeen iyo maalin walba
Ilaha Jannnada ( Lakes)
1. Isha Tasniim
Waa wax ay cabaan reer jannada waxa ugu sharafka badan jannada oo ka sameysan raxiiq al makhtum ( Ubaxa carfaya) ooy cabaan kuwa Allah uu soo dhoweeyey, waxaana loogo daraa Misk kuwa loo yaqaan asxaabul yamiin, waana meesha Allah dadka faray iney u baratammaan
2. Isha Salsabiil
Waxaan leh ahlul Yamiin, waana cabitaan lagu daray Zanjabiil.
3. Isha, Mizaajkeedu yahay Kaafuur
Waxaan leh Abraarta, waan cabitaan aan lagu sakhraamin, oon lagu madax wareerin ( Hang Over) oon caqliga qaadin, oo qofka caba ka farxisa farax badan ( Natural High) oonan ayadoo kale dunida oollin. Waxaana jooga wiilal mukhalladuun oo u eg luul la daadiyay, oo ku la wareegaya koobab dahab iyo qalin ah.
Cunnada Ahlul Jannada
1. Hilib, hilib shimbiraha, faakihada, iyo wax walboy naftoodu tabto.
Waa geedo tiirkoodu ( stem) ka sameysan yahay dahab, caleentooduna dhagaxda Zummurrudka qaaliga ah oo cagaaran, iyo jawahir.
1. Geedka Tuubaa
Wuxuu sheegay Rasuulku SAWS inuu geedkaas u egyahay geedka qumbaha, aadna u ballaadhan yahay, oo ay midhihiisu ka soo dhex baxaan dharka reer Jannada ay xidhaan, midho walbana ay ka sameysmato todobaatan dhar la xidho, mdabo qurxan ooayan arkin rer adduunka
2. Sidratul Muntahaa
Waa geed weyn oo ku hoos yaal carshiga Raxmaanka hoostiisa, oo xidikiisu ka soo burqadaan afata webi, waxaan ku dheehan Nuurka Allah SWT iyo malaaigta farabadan. waana maqaamka Sayyidinaa Ibraahim, CS, ooy la joogaan carruurta muslimiinta oo saqiirtay, oo ku dhgintay fitradii lagu uumay, asagoo u ah sidii aabbahood. Caleenta geedkaas waxaa ku yaal cilmiga uunka oo dhan, iyo wuxuusan ogeyn Allah mooyee SWT,
1. Al Tiin
iyo wax walboo Allah ku uumay dunida oo midha ah iyo waxan la oqoon oo cusub
Reer Jannaadka Xaalkooda
1. Ragga Ree Jannadka
Waxaa Alla soo saardi doonaa ragga reee jannadka ah ayagoo u eg aabbahaood Adam, ayafgoo qaawan, oo qurxoon oo indho kuulan oo cumrigoodana yahay 33 sano jir. Ayagoo leh quruxda Nabi Yusuf, qalbiga Ayyuub, iyo carrabka Nabi Muxammad SAWS. Ayagoo allah u dhameystiray, qurux iyo dhallinyaranimo, oonan dhimanin, oonan hurdin.
2. Haweenka Ree Jannaadka
Haweenka Jannada waa labo nooc
a. Xuurul Cayn
Waan uun Allah uu ku uumay jannada, oo loo uumay ree jannadka oo Allah uu ku mataalay Yaaquut wal marjaan, ama lul maknuun.
waa haween aad u qurqurxoon, carfoon, kor jilcan, hadii mid ayaga ka mid ahi ay soo qooraansato reer adduunka, wexey iftiimin laheyd adduunkoo dhan iyo wax dul jooga, muminkana waxaa sugaya kuwa aan la tirin karin oo ayaga ah.
b. Haweenka Ree Adduunka ee muminatka ah.
Kuwass waa boqorrada Jannada, waana ka sharaf badan yihiin, oo ka fadli badan yihiin, oona ka qurux badan yihiin Xuurul Ceynka
Waa uunka jannada oo ka adeega jannada oo da yar, oo u adeega reer jannadka, ayagoo la wareega cunnada iyo cabitaanka , mar walbana heegan u ah iney u adeegaan ahlul Jannada. Araggooda aad buu u qurxoon yahay taasoo farax gelisa reervjannadka markey ka qaadanayaan cuunada iyo cabitaanka
d. Dhasha Jannada Ku dhalata.
Dhashaani waa naxariista Allah siiyo dadka muslimiinta ah oo adduunka ku dhali waayey acrruur , haddey doonaan dhallan, Allah ayaa siiya carruur ahlul Jannah ah ooy ku farxaan, raxmaddiisa awgeed.
Allow naga yeel kuwa dhaxla Jannadaada, oo istaahila nicmadaada.
Allow naxariistaada nagu daji daaraheeda
Allow nagu arzaaq fardowska sare adigoo noo naxarisanaya haddanan ku sitaahilin camalkeenna, maxaa yeelay ma heyno camal na gaadhsiin kara Fardowka sare marka laga reebo jaceylka aan u qabno aragtida wajigaaga kariimka ah, iyo jaceylka Rasuulka SAWS na soo gaadhsiiyey hagar la’aan fartiintaadii oo kaamil ah
Mahad oo dhanna waxaa mudan Allah SWT.
Walaal, haddad u dirto dhambaalkan qof aad jeceshahay, wuxuu kuu noqon shafeec maalinka qiyaamaha.
Current time: 02-16-2019, 11:22 AM Powered By MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.